Abakhiqizi bemikhiqizo nabaphakeli | Angeza
● Insizakalo eyenziwe ngokwezifiso:
Sithuthukise inethiwekhi yabakhiqizi abangu-1000 kulo lonke elaseChina.Lokhu sicela ukuthi sikunikeze noma yiziphi izixazululo ezenziwe ngenani ezengeziwe.
● Inzuzo yamanani:
Sinikezela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme ngamaphoyinti wentengo ahlukahlukene azokwenza kube lula kuwe ukwamukela izidingo zobuso obuhlukahlukene nabakhona.
● Isampula yamahhala:
Sinikeza amasampula wamahhala asuselwe kwizidingo zakho ezithile zokuhlola i-Qua Ity yemikhiqizo yethu.Ibalulekile kithi ukuthola lokho okudingayo ngqo.
● Isiqinisekiso sekhwalithi:
Sinezindinganiso zokulawula eziphezulu kakhulu ze-Qua ITY futhi kubandakanya nokuhlolwa ngokuqhubekayo kusuka kuma-SGS, i-BV ne-Tuv enikeza amakhasimende ethu iziqinisekiso zekhwalithi yeminyaka engu-5 kuye kwayi-10 ngezinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo yethu.
● Ukulethwa okusheshayo:
Sithembisa ukuthunyelwa kungakapheli inyanga eyodwa lapho sitholile idiphozithi.Indlela ematasatasa, isikhathi sethu sesikhathi singadinga ukulungiswa ngokufanele kwethimba lethu.
● Service enhle kakhulu:
Iqembu lethu elinolwazi kakhulu, i-Professional Team Wil likunikeza insizakalo yamakhasimende ephakeme nsuku zonke. Qhathanisa ukwesekwa komkhiqizo, amasampula, izikhathi zokukhiqiza ezisheshayo, ukuphuma okungeziwe, okukhona njalo lapha kuwe.
● Ukufanele ukwethenjwa:
Njengamanje sinenethiwekhi yokusabalalisa emazweni angaphezu kwama-20 ngaphezulu kwethu, eYurophu ne-Asia.Plase Sazise ukuthi yini esingakwenzela yona.